Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulmay – Qaranimo Online
You are here: Home 2017 February 11 Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulmay
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulmay
Posted on February 11, 2017 by Adan Awale | 0 Comments
Muqdisho (Horumar Online) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah kasoo baxaya kulankii saacadaha qaatay ee Villa Somalia ku dhexmaray Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Shiikh oo ay ka muuqatay jaceyl iyo farxad ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha cusub waxayna kormeer ahaan usoo mareen qeybaha ay ka kooban tahay madaxtooyada.
Wuxuu sidoo kale soo dhigay muuqaalka soo dhaweynta madaxweynaha cusub uu u sameeyey waxaadna ka daawan kartaa qeybta hoose ee warbixintaan.
Maamulka gobolka Sh/dhexe oo gaarsiiyay deeq gargaar ah deegaanka Timire Maamuljkaasi June 2, 2017
Madaxweyne Jubaland Oo Kismaayo Ku qaabilay Madaxa Hey’adda Qaxootiga Aduunka December 18, 2017
Saraakiil iyo mudanayaal ku jira guddiga amniga Baarlamaanka oo tababar ugu furmay Kambala October 23, 2015
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo guddoomiyey Shirka Amniga. May 10, 2017
Fresh doubts over Ilaria Alpi murder conviction April 5, 2016
Sgt Major Mohammed Amin, Idi Amin’s Somali son October 11, 2015
Suspended sentence for stabbing his compatriot July 9, 2016
Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ku baaqay in lagu laabto doorashada 8 Xildhibaan July 17, 2017